Indawo epholileyo kwaye ezolileyo, igumbi labucala kunye negumbi lokuhlambela - I-Airbnb
Indawo epholileyo kwaye ezolileyo, igumbi labucala kunye negumbi lokuhlambela
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguKim
Ikhaya lethu elitsha elithandekayo likwindawo yokuhlala ezolileyo. Sisondele kuyo yonke into! Siziikhilomitha ezi-2.5 kuphela ukusuka kwi-Apalachee Regional Park. Kukho ukutya, ukuthenga, kunye neendlela zokuhamba intaba, kunye nokunye, zonke ezikufutshane. Igumbi lakho lokulala libandakanya ibhedi yokumkanikazi epholileyo, ukufikelela kwigumbi lokuhlambela labucala, kunye nabo bonke ubutofotofo bekhaya.
Ikhaya lethu elitsha elithandekayo likwindawo yokuhlala ezolileyo- sikufutshane nayo yonke into! Kukho indawo yokutyela, yokuthenga, kunye neepaki, zonke ezikufutshane. Igumbi lakho lokulala libandakanya ibhedi epholileyo yokumkanikazi, umtya wokutshaja wefowuni yakho kunye ne-elektroniki, ukufikelela kwindlu yangasese yangasese, i-oveni ye-microwave, ifriji encinci, umenzi wekofu waseKeurig kunye nabo bonke ubutofotofo bekhaya.
5.0 · Izimvo eziyi-150
Ubumelwane bethu bulungile - kufutshane nayo yonke into, kakhulu okanye encinci njengoko ufuna ukwenza! Ukuthenga, ukutya, ukukhwela intaba, ukubaleka iindlela, ukukhwela ibhayisekile entabeni, igalufa, uyibiza ngokuba yibani. Sikude imizuzu kude kwiipaki ezinkulu; ICascades Park kunye neTom Brown Park zibonelela ngemisebenzi emininzi yangaphandle. Sikwakufutshane neRhuluneli ye-Square Mall kunye ne-Wal-Mart, i-Sam's, iThagethi, kunye nokunye!
Kakhulu okanye kancinci njengoko ufuna. Siza kukunika iingcebiso ezintle malunga neendawo zokutya, zokusela, ukuthengisa kunye nokuhlola! Siza kwenza konke esinako ukwenza ukuhlala kwakho kukhululeke kwaye kubemnandi!